सहकारीका समस्या समाधान गर्न कडा नीति अबलम्बन गरिने « Sahakari Nepal
सहकारीका समस्या समाधान गर्न कडा नीति अबलम्बन गरिने
प्रकाशित मिति : 22 November, 2014 10:37 am
काठमाडौं, मंसिर ६ । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवि नेपालले सहकासहकारीका समस्या समाधान गर्न कडा नीति अबलम्बन गरिने
काठमाडौं, मंसिर ६ । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवि नेपालले सहकारीमा समस्या समाधान गर्न सहकारी नीति कडा बनाउन लागिएको बताउनुभयो । फितलो कानुनका कारण सहकारी समस्यामा परेको भन्दै उहाले कडा नीति अबलम्बन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
म्याग्दी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको शनिबार काठमाडौमा उद्घाटन गनुहुदै डा. नेपालले दैनिक रुपमा २ हजार युवाहरु विदेश जाने परम्पराला्ई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । देश अब रेमिट्यान्सको साहरामा चल्न नसक्ने भन्दै डा नेपालले आत्मनिर्भर देश बनाउन राष्ट्रको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग अपरीहार्य भएकोे बताउनुभयो । सहकारीहरुले लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाउंदै लजानुपर्ने भन्दै उहाँले पुजीको सही सदुपयोग गर्न सकिएन भने भविश्यमा समस्या आईपर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय सरकारले पर्याप्त लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको भन्दै उहाँले भारतसंग भएको विद्युत व्यापार सम्झौता पनि त्यसैको परिणाम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपालमा सहकारीको स्थापना र सञ्चालन भएको ६ दशक भएपनि थुप्रै द्धिविधाहरु विद्यमान भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई स्पष्ट पार्न सरकारले छिट्टै नीति ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा म्याग्दीका सभाषद नवराज शर्मा, रेशम बहादुर बानियाँ र नरदेवी पुनले सहकारीले म्याग्दीको सबै गाविसलाई समेट्न सफल भएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँहरुले संविधान निर्माणका क्रममा सहकारी प्रति रहेका समस्याहरुलाई हल गर्न सोही अनुसारको नीति नियम बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभएको थियो । सहकारी अध्यक्ष थदेवी पुनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी संका निवर्तमान सञ्चालक तथा महेन्द्रनारायण निधी स्वास्थ्य सहकारी अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम तिवारी, सहकारीका सल्लाहकार डा. ज्योती शेरचन, ग्राण्डी अस्पतालका अध्यक्ष दिपक कुवंर, सीतापाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदार मानन्धर र म्याग्दी धौलागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्ध सञ्चालक गाविन्द प्रसाद शर्मा लगायतले सहकारीको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । स
हकारीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन सहकारीका सचिब एवं प्रबन्ध सञ्चालक दिपबहादुर छन्त्यालले गर्नुभएको थियो ।
सहकारीले कृषि, व्यापार, घरजग्गा लगायतको क्षेत्रमा १९ करोड २१ लाख लगानी गरेको छ भने एकबर्षमा ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको सहकारीका प्रबन्ध सञ्चालक दीप छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो । सहकारीले म्याग्दी जिल्लालाई फ्रि वाईफाई जिल्ला बनाउन जिविसले सुरु गरेको अभियानलाई रु एकलाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि पनि सहकारीले म्याग्दी जिल्लाको कृषि, स्वास्थ्य र दैवी प्रकोप लगायतका समस्यामा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत सहयोग गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा म्याग्दीका सभाषद्हरुलाई बधाई ज्ञापन सहित सम्मान गरिएको थियो ।
विद्यार्थीलाई सम्मान र पुरस्कृत
म्याग्दी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्रवेशिका परीक्षा २०७०मा उत्कृष्ट अंक ल्याउन विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कृत गरेको छ । संस्थाको सातौ बार्षिक साधारणसभाको अवसरमा शनिबार काठमाडौमा संस्थागत, सामुदायिक र लगानी कर्ताका छोराछोरीहरुलाई सम्मान सहित पुरस्कृत गरेको हो । सामुदायिक विद्यालय तर्फ छात्रमा सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउन जामुनाखर्क उमाविका विशाल ढुंगाना, छात्रातर्फ विभा ढंगाना ंस्थागत तर्फ छात्रतर्फ न्यु वेष्ट पोईन्ट आवासिय उमाविका सज्जन थापा र छात्रा तर्फ सोही विद्यालयकै निज्ञा सुवेदीलाई प्रस्कृत गरिएको हो । त्यस्तै, लगानीकताका छोराछोरीबाट छात्रा तर्फ दीपुना केसी र युवराज थापालाई पुरस्कृत गरिएको सहकारीले जनाएको छ । विद्यार्थीहरुलाई नगद पाँच हजार सहित प्रमाणपत्रले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले पुरस्कृत गरिएको थियो । त्यस्तै सहकारीले, उत्कृष्ट बचत निक्षेप गर्ने भिम प्रसाद थापा र शंकरदास राजवाहक उत्कृष्ट आवधिक निक्षेप गर्ने टिका बहादुर पुन र बेलबहादुर पुन, असल कारोबार गर्ने बालकुमारी बुढा र कर्णबहादुर बुढालाई प्रशंसा पत्र सहित सम्मान गरिएको छ ।
रीमा समस्या समाधान गर्न सहकारी नीति कडा बनाउन लागिएको बताउनुभयो । फितलो कानुनका कारण सहकारी समस्यामा परेको भन्दै उहाले कडा नीति अबलम्बन गर्न लागिएको बताउनुभयो । म्याग्दी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको शनिबार काठमाडौमा उद्घाटन गनुहुदै डा. नेपालले दैनिक रुपमा २ हजार युवाहरु विदेश जाने परम्पराला्ई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । देश अब रेमिट्यान्सको साहरामा चल्न नसक्ने भन्दै डा नेपालले आत्मनिर्भर देश बनाउन राष्ट्रको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग अपरीहार्य भएकोे बताउनुभयो । सहकारीहरुले लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाउंदै लजानुपर्ने भन्दै उहाँले पुजीको सही सदुपयोग गर्न सकिएन भने भविश्यमा समस्या आईपर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय सरकारले पर्याप्त लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको भन्दै उहाँले भारतसंग भएको विद्युत व्यापार सम्झौता पनि त्यसैको परिणाम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपालमा सहकारीको स्थापना र सञ्चालन भएको ६ दशक भएपनि थुप्रै द्धिविधाहरु विद्यमान भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई स्पष्ट पार्न सरकारले छिट्टै नीति ल्याउन लागेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा म्याग्दीका सभाषद नवराज शर्मा, रेशम बहादुर बानियाँ र नरदेवी पुनले सहकारीले म्याग्दीको सबै गाविसलाई समेट्न सफल भएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँहरुले संविधान निर्माणका क्रममा सहकारी प्रति रहेका समस्याहरुलाई हल गर्न सोही अनुसारको नीति नियम बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभएको थियो । सहकारी अध्यक्ष थदेवी पुनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी संका निवर्तमान सञ्चालक तथा महेन्द्रनारायण निधी स्वास्थ्य सहकारी अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम तिवारी, सहकारीका सल्लाहकार डा. ज्योती शेरचन, ग्राण्डी अस्पतालका अध्यक्ष दिपक कुवंर, सीतापाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदार मानन्धर र म्याग्दी धौलागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्ध सञ्चालक गाविन्द प्रसाद शर्मा लगायतले सहकारीको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । स हकारीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन सहकारीका सचिब एवं प्रबन्ध सञ्चालक दिपबहादुर छन्त्यालले गर्नुभएको थियो । सहकारीले कृषि, व्यापार, घरजग्गा लगायतको क्षेत्रमा १९ करोड २१ लाख लगानी गरेको छ भने एकबर्षमा ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको सहकारीका प्रबन्ध सञ्चालक दीप छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो । सहकारीले म्याग्दी जिल्लालाई फ्रि वाईफाई जिल्ला बनाउन जिविसले सुरु गरेको अभियानलाई रु एकलाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि पनि सहकारीले म्याग्दी जिल्लाको कृषि, स्वास्थ्य र दैवी प्रकोप लगायतका समस्यामा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत सहयोग गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा म्याग्दीका सभाषद्हरुलाई बधाई ज्ञापन सहित सम्मान गरिएको थियो । विद्यार्थीलाई सम्मान र पुरस्कृत म्याग्दी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्रवेशिका परीक्षा २०७०मा उत्कृष्ट अंक ल्याउन विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कृत गरेको छ । संस्थाको सातौ बार्षिक साधारणसभाको अवसरमा शनिबार काठमाडौमा संस्थागत, सामुदायिक र लगानी कर्ताका छोराछोरीहरुलाई सम्मान सहित पुरस्कृत गरेको हो । सामुदायिक विद्यालय तर्फ छात्रमा सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउन जामुनाखर्क उमाविका विशाल ढुंगाना, छात्रातर्फ विभा ढंगाना ंस्थागत तर्फ छात्रतर्फ न्यु वेष्ट पोईन्ट आवासिय उमाविका सज्जन थापा र छात्रा तर्फ सोही विद्यालयकै निज्ञा सुवेदीलाई प्रस्कृत गरिएको हो । त्यस्तै, लगानीकताका छोराछोरीबाट छात्रा तर्फ दीपुना केसी र युवराज थापालाई पुरस्कृत गरिएको सहकारीले जनाएको छ । विद्यार्थीहरुलाई नगद पाँच हजार सहित प्रमाणपत्रले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले पुरस्कृत गरिएको थियो । त्यस्तै सहकारीले, उत्कृष्ट बचत निक्षेप गर्ने भिम प्रसाद थापा र शंकरदास राजवाहक उत्कृष्ट आवधिक निक्षेप गर्ने टिका बहादुर पुन र बेलबहादुर पुन, असल कारोबार गर्ने बालकुमारी बुढा र कर्णबहादुर बुढालाई प्रशंसा पत्र सहित सम्मान गरिएको छ ।